Maqaalka Lorraine Ball ee Martech Zone |
Maqaallada by Ball Lorraine
Sanadkiiba mar ayaan jabiyaa kubbadii hore ee madadaalada ahayd waxaanan la wadaagaa waxyar saadaalin suuq geyn ah oo ku saabsan isbeddelada aan isleeyahay waxay muhiim u noqon doonaan ganacsiyada yaryar. Sanadkii la soo dhaafay waxaan si sax ah u saadaaliyay kororka xayeysiinta bulshada, doorka la ballaariyay ee ah aaladda SEO iyo xaqiiqda ah in nashqadeynta jawaabta moobiilku aysan noqon doonin mid ikhtiyaari ah. Waad akhrin kartaa dhammaan saadaasheyda suuq-geynta 2015 oo waxaad arki kartaa sida aan ugu dhawaa. Kadib aqri
Sabti, Noofembar 9, 2013 Arbacada, February 9, 2022 Ball Lorraine
Kaliya markaad u maleyneyso inaad gacan ku heyso alaabtan suuqgeynta internetka, dusha sare ee buuqa. Waqtigan xaadirka ah, Suuqgeynta Inbound ayaa sameyneysa wareegyo. Qof kastaa wuu ka hadlayaa, laakiin waa maxay, sidee ku bilaabaysaa, iyo qalab noocee ah ayaad u baahan tahay? Suuq geynta waxay ka bilaabataa macluumaad bilaash ah, oo lagu bixiyo marinnada bulshada, raadinta, ama xayeysiinta lacagta lagu bixiyo. Ujeeddadu waa in la iftiimiyo xiisaha rajada oo laga dhigo inay ka ganacsadaan
Isniin, Disembar 31, 2012 Isniin, Disembar 31, 2012 Ball Lorraine
Toban sano ka hor, ikhtiyaarrada suuq-geynta ee milkiileyaasha ganacsiyada yaryar way iska xadidnaayeen. Warbaahinta dhaqanka sida raadiyaha, Tvga iyo xitaa xayeysiisyada daabacaadda badankood aad ayey qaali ugu ahaayeen ganacsiga yar yar. Kadibna waxaa yimid internetka. Suuqgeynta emaylka, warbaahinta bulshada, baloogyada iyo ereyada xayeysiinta ah ayaa milkiileyaasha ganacsiyada yaryar siiya fursad ay farriintooda uga soo saaraan. Si lama filaan ah, waxaad u abuuri laheyd dhalanteed, shirkaddaadu aad ayey uga weyneyd iyadoo la kaashanayo degel websaydh ah iyo bulsho xoog leh
Sabti, Febraayo 11, 2012 Arbacada, December 26, 2012 Ball Lorraine
Lixdan sano ka hor iyadoo telefishanka ka soo baxayay goobta, xayeysiisyada TV-ga waxay u egyihiin xayeysiisyada raadiyaha. Waxay ka koobnaayeen ugu horreyn nin caawiye ah oo taagan kaameerada hortiisa, oo sharraxaya wax soo saar, sida ugu badan ee uu idaacadda uga sii daayo. Waxa kaliya ee ay ku kala duwanaayeen ayaa ahayd inaad aragto isaga oo sita sheyga. Sida TV-ga u bislaaday, ayaa sidoo kale xayaysiisyadu u ballameen. Maaddaama suuqleyda ay barteen awoodda muuqaalka muuqaalka ah waxay abuureen xayeysiis si ay shucuurta u galaan, qaar baa qosol badnaa, kuwo kalena